Jiolahy mpanafika eto an-drenivohitra Mampiasa basy mahery vaika sy ody gasy
Zandarimariam-pirenena Raikitra ny fiadiana ny amboaran’ny SEG
Nosokafana omaly 18 jona 2019 tao amin’ny Toby Ratsimandrava ny lalao ara-panatanjahatena iadiana ny amboaran’ny Sekreteram-panajakana miadidy ny zandarimaria sy ny komandin’ny zandarimariam-pirenena.
Halatra omby sy fandrobana Mandray 50 000 ariary isan’andro ny dahalo iray
Nanamafy indray ny lehiben’ny etamazaoro jeneralin’ny tafika Malagasy (Cemgam) ny jeneraly Rakotonirina Theophile fa tena mila foanana ny dahalo ambony latabatra fa ireo no tena mahatonga ny ady amin’ny asan-dahalo ho sarotra amin’izao fotoana.
Halatra entana mitentina 13 tapitrisa Ariary Nidoboka am-ponja ilay mpanampy sy ny sakaizany
Ny sabotsy 04 mey 2019 tokony ho tamin’ny 8 ora sasany alina dia renim-pianakaviana iray, 32 taona, monina eny amin’ny faritra 67Ha
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Rakotra polisy manao fanamiana sivily ny faritra mena
Akanjo toy ny olon-drehetra mba tsy hisy hahafantaran’ny jiolahy azy no anaovan’ny mpitandro ny filaminana, efa ho roa herinandro izay hijokoana ireo jiolahy mpanendaka sy mpangarom-paosy eny amin’ny faritra mavaivay.
Misandoka ho mpanao gazety ireo jiolahy Fanendahana sy fandrobana
Rehefa avy nifanenjehana teo amin’ny faritra Andraharo ireo jiolahy mpanendaka môtô dia nampiseho ny karatra maha mpiasa amin’ny fahitalavitra ny iray tamin’ireo olon-dratsy.
Jiolahy miisa enina niaraka tamina fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy poleta efatra, antsy maranitra, ody gasy no saron’ny mpitandro ny filaminana eo anivon’ny sampandraharaha misahana ny ady
heloka be vava etsy Anosy nanomboka ny 28 febroary ka hatramin’ny 1 martsa lasa teo, namaky tranon’olona teto an-drenivohitra. Raha araka ny fanazavan’ny kaomisera Serali dia nanomboka tamin’ny volana desambra taona 2018 lasa teo izy ireo no nanao ny asa ratsiny hatramin’ny volana janoary taona 2019. Tokantrano maromaro no nahita faisana toy ilay teny Ankorondrano izay nahaverezana vola 100 tapitrisa Ar, ny tao Antohomadinika nahaverezana vola 26 tapitrisa Ar. Mpitandro ny filaminana efa tsy miasa intsony ny iray amin’izy ireo, ahiahiana ho nanome basy ireto namany dimy hafa. Natolotra ny fitsarana omaly ihany izy enina mirahalahy ireto.